သရော်စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 27
ဂျော်ဒီး စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ဂျီးဒေါ်တို့ မိုးမခရွာကြီးမှာ ခုတလော အပြောင်းအလည်းတွေက ဗလောင်းဗလဲကို ဖြစ်နေသည်။ ရွာတံခါးမှာ ၀င်သူထွက်သူတွေနဲ့ စည်စည်ကားကားပျားပန်းခပ်လို့။ အိမ်သာလို့ဧည့်လာတာလားတော့ မသိ။ ဧည့်သည်အတော်များများကတော့ သွားရည် တမျှားမျှားနဲ့မို့ သွားရည်ခံလေးတွေတောင် ခံထားရဆိုပဲ။ No tags for this post.
သူရိန်ထက်၊ စက်တင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ တခါတုန်းက အာဖရိက တောထဲမှာ နေထိုင်တဲ့၊ လူနေမှု အင်မတန် နိမ့်ကျပြီး ဗဟုသုတခေါင်းပါးတယ်လို့ သတင်းကြီးတဲ့ ကျေးရွာလေးတရွာကို ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တစုဟာ သာသနာပြု အစီအစဉ်တခုအနေနဲ့ ရောက်သွားပါသတဲ့။ ဒီလူငယ်တစုဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံကြီးသားတွေ၊ ဗဟုသုတ ပြည့်ဝသူတွေ အဖြစ်လည်း အထင်ရောက် နေသူတွေပေါ့။ သူတို့ နေထိုင်ခွင့်ရ ထားတဲ့ ကာလတိုလေးအတွင်းမှာ ရွာထဲကို လိုက်လေ့လာ၊ လူစုလူဝေး နဲ့ဆို တရားဟော၊ ရွာလူကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပေါ့လေ။ ကျေးရွာလေးဆိုတော့လည်း လိုအပ်အားနည်းချက် တွေကတော့ ရှိတာ ထုံးစံပဲကိုး။ လမ်းတွေ မကောင်းဘူး၊ လူနေမှု နိမ့်တယ်။ ပညာမတတ်ဘူး၊ လျှပ်စစ်မီး မရှိဘူး။ တဦးချင်းဝင်ငွေနည်းပါးတယ်.. စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့်...
ဂျော်ဒီး၊ သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဂျီးဒေါ်တယောက် ကိုယ့် ဖာသာကိုတောင် မယုံချင် ။ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီလို ခန်းနားကြီးကျယ် တောက်ပပြောင်လက် စက်စက်ယိုနေတဲ့ခန်းမကြီးထဲကို ရောက်နေရပါလိမ့် ။ တခါမှမခြုံစဖူး အိနြေ္ဒရရအသာချထားတဲ့ပုဝါနှစ်စကလည်း လှချက်တော် ။နေပါဦး…အခုရောက်နေတဲ့ ခန်းမကြီးက… ဟိုရွာလူကြီးဆော်ကြမ်းရဲ့ မှုန်ရီေ၀၀ါး ၀ါးတားတားသတင်းစာတွေထဲမှာ ခဏခဏတွေ့ဖူးတဲ့ ဂျီးဒေါ်တို့ မိုးမခရွာရဲ့ ရွာထောင်စု လွှတ်တော်ကြီးပါလား ။ အမယ် ငါ့ ဘေးနားမှာ ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူ နဲ့။ဘယ်သူများလဲ မှတ်တယ်။ ဆိုက်ကားမာစတာ ကိုစာကလေး ပါလား။ “စာကလေး … တို့တွေ...
“ပဒိုင်းသီး မစားဘဲ ရူးသူများ” – Gyaw Dee and the most crazy guys
ဂျော်ဒီး ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ “ဆိုင်ရှင်ဆိုတာကြီးကိုလဲဖွင့်ရော ကျုပ်တို့ရွာဆီကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ အငမ်းမရ တရဟော ၀င်လာတယ်လေ။ အခု ကျုပ်ဆို ဟင်းရွက်အထူးပြု ကမ်ပဏီကြီးက ဖွင့်တဲ့ မိနစ်တို သင်တန်းတွေ တက်ပြီး စီးပွါးရေး နားရော မျက်စိရော အို ….” ဒီနေ့ ဂျီးတော် တယောက် No tags for this post.
Thargyi Maung Zeya – မှားပြီးရင်းမှား ၂
မှားပြီးရင်းမှား ၂ သားကြီးမောင်ဇေယျ ။ ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၂ ကျနော်ဟာ ငယ်စဉ်က မသိလို့မှားခဲ့ပါတယ် ။ မတတ်လို့မှားခဲ့ပါတယ် ။ နောက် တော့ မတော်တဆမှားခဲ့ ပြန်ပါတယ်။ လျှမ်းလို့မှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျနော်ဟာ မကြာခဏ မှားခဲ့ရာမှ မမှားရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀ါသနာ အရမှားတယ်လို့ ဆိုရမယ့် အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှ တဆင့်အမှား ပါရမီရင့်သန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အမှားပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်စည်းခဲ့သလဲလို့ နောက်ကြောင်းပြန်တွေးမိပါတယ်။ ကျနော် မူလတန်းလောက်မှာ မူလတန်းအဆင့်အမှားများကိုအောင်အောင်မြင်မြင်မှားခဲ့ပြီးနောက် အလယ်တန်း အထက်တန်း အဆင့်တွေမှာလည်း ဂုဏ်ထူးအဆင့်လောက်နဲ့မှားခဲ့ ပြန်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ တက္ကသိုလ် အဆင့်အမှားများကို လည်း ဂရိန် ဖိုးထက် မနိမ့်သော အမှားများမှားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တနေ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပန်းချီးခန်းမမှာ ကျနော်ဟာ အင်ယားကန်ရူ့ခင်းကလေးကို လွမ်းမောဖွယ် အပြာနုမိူင်းမိူင်း...
မှားပြီးရင်းမှား ၁ သားကြီးမောင်ဇေယျ ၊ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှားဆုံး လုပ်ရပ်ဟာ လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာပါလို့ ပြောကြရင် ဖန်ဆင်းခံ လူသားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်မျိုးသားကြီးမောင်ဇေယျကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာဟာ အမှားတကာ့အမှားဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ ကျနော်ဟာငယ်စဉ်က မကြာခဏအမှားများပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ လေ့ကျင့်ခဏ်းစာအုပ်မှာ အမှားတွေ ဘလပွပါ။ အဲ ကျနော်စာအုပ်မှာ အမှားတွေ နည်းသွားရင် ဒါမှမဟုတ် အမှားတွေကို မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒါ တခုတခု အကြီးအကျယ်မှားနေပြီလို့ ကျနော့်ဆရာက ကျနော့်ကိုမကြာခဏပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနောမသိလို့မှားမိတာပါ။ မတတ်လို့မှားမိတာပါ။ အဲဒီလို မကြာခဏမှားရာမှတဆင့် ကျနော်ဟာ မမှားရမနေနိုင်အောင်မှားတတ်လာပါတော့တယ်။ တနည်းပြောရရင် အမှားကို ကျနော်ဟာ တော်တော်ဝါသနာ ပါလာပါတော့တယ်။ ဥပမာ ကျောင်းအချိန်ဇယားမှားခြင်း ၊ လေ့ကျင့်ခဏ်းစာအုပ်များ မှားထည့်လာခြင်း၊ ကျောင်းခွင့်တိုင်စာနဲ့ ရည်းစားစာ...
ဖိုးထက် ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ရှေးသရောအခါက အသားဖြူဖြူ၊ နှာခေါင်းပြားပြား၊ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း လူမျိုးများနေထိုင်သော တိုင်းပြည်ကြီးနှင့် အသားမဲမဲ၊ နှာခေါင်း ချွန်ချွန်၊ မျက်လုံး မဲမဲလူမျိုးများ နေထိုင်သော တိုင်းပြည် နှစ်ခုအကြားတွင် အသားဝါ၀ါ၊ နှာခေါင်း ပြားပြားလဲ ရှိ၊ မပြားတပြားလဲရှိသော လူမျိုးများနေထိုင်သည့် “ဘားမြန်မာ” ဟုခေါ်တွင်သောတိုင်းပြည်တစ်ခု ရှိလေသည်။ ထိုနိုင်ငံငယ်လေးအတွင်းတွင် တစ်ရာ့တစ်ပါးမက သော လူမျိုးကွဲများလဲ မှီတင်းနေထိုင်ကြလေ၏။ နိုင်ငံသား အများစုကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဘာသာတရားသည် ရှင်တော်ဂေါတမ၏ မေတ္တာတရားအခြေခံသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။ သို့ သော် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများ၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှုကောင်းမွန်သောကြောင့် နိုင်ငံသားအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အရွဲ့တိုက်ကိုးကွယ် ယုံ ကြည်ကြသလားဟု သံသယ၀င်နိုင်စေလောက်၏။ ရှင်တော် ဗုဒ္ဓက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး...
ဟာသဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၂ အိန္ဒိယက ယူပီးသုံးတယ် ကျုပ်တို့ က ခိုးပြီးသုံးတယ် No tags for this post.
ဂျီးဒေါ် အင် ကုမ္မဏီ ဂျော်ဒီး၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ “တနေ့ လာလည်း ကန်းစွန်းရွက်ကို ရေလုံပြုတ်၊ နောက်တနေ့ လာလဲ ဒီကန်စွန်းရွက်က ရေလုံပြုတ်။ ဒီဒုက္ခ၀ဋ်က… ဘယ်တော့များ ကျွတ်ပါ့။ ရို့ ရို့အဟ အဟ …” စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ကလေးတွေဆိုတတ်တဲ့ ရပ်ပါဆိုလား၊ သွားပါဆိုလား … အဲဒလိုမျိုးလေးတောင် ဆိုပစ်လိုက်ချင်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးစီမံချက်ဆိုလား။ ကြားကာစက အားရှိလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း ။ တို့လိုဆင်းရဲသားတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်တော့ မဟဲ့။ ကန်စွန်းရွက် ရေလုံပြုတ်နဲ့ နှစ်ပါးသွားကာ၊ မမြိုင်လဲထ မြိုင်လဲထနေရတဲ့ဘ၀က လွတ်တော့မယ်ဟဲ့ … လို့ တွေးကာ သမ္မဒကြီးကို ကျေးဇူးတွေ ကြိုတင်ကာ မေတ္တာတွေ...
မင်းငြိမ်းအေး – ပျင်းရိခြင်းအကြောင်း https://t.co/fkOsFIxUXZ https://t.co/IdRiANOBAn about 18 minutes ago ReplyRetweetFavorite